नयाँ वर्ष २०७९ सालमा चम्किंदैछ यी ६ राशिको भाग्य [वार्षिक राशिफल] – Jagaran Nepal
Jagaran Nepal बुधबार, चैत्र ३०, २०७८
मेष राशि (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ.) l मेष राशि हुनेहरूको लागि नयाँवर्ष वि.सं. २०७९ सालको पूर्वार्ध अनुकूल रहने देखिएको छ । अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा परिश्रमले सफलता मिल्ने छ । सन्तानाभिलाषीहरूलाई सन्तान प्राप्ति हुनेछ भने कतिपयलाई भइरेका सन्तानबाट सुख एवं सन्तोष मिल्ने छ । उद्यमव्यवसाय आदिमा प्रगति हुनगइ राम्रो लाभ हातपार्न सकिने छ । रोजगारीको खोजिमा रहनुभएकाहरूलाई नोकरी मिल्ने छ भने अल्लि मेहनत बढाउनाले जागिरेहरूलाई पदोन्नति हुनसक्ने छ । राजनीति, समाजसेवा लगायतका विशेष उद्यम कार्यमा सफलताको लागि भने अन्तमा बताईने ग्रहउपचारका उपायहरू अवलम्बन गर्नु तपाईको लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।
यद्यपि विवाहयोग्य युवायुवतीलाई विवाहसम्बन्ध गासिने सम्भावना देखिएको, नयाँ प्रेमसम्बन्ध अवसर मिल्ने छ रपनि विवाह एवं प्रेममा कपटनियती भोग्न पर्नसक्ने भय पनि रहेको हुनाले सुझबुझ पुर्याउन निकै जरुरी देखिन्छ । केही अल्झनको बाबजुत जग्गाजमिन जोड्नसकिने छ । वैदेशिक रोजगारी गरिरहनु भएकाहरूलाई पनि समय अनुकूल बन्ने छ, राम्रै धनार्जन गरी घरफर्कन सकिने छ ।
केही शुभप्रदफलको बाबजुत पशुचौपायामा हानी गर्ने ग्रहगोचरको भूमिका देखिन्छ । रपनि खोटीदोषी पशुबाट तसै निर्वाहजन्य फाइदा उठाउन सकिएला । यो कुरालाई बुझेर पशुपालन व्यवसाय गर्नेहरूले ख्याल पुर्याउनु पर्ने विषय रहेको मनन् गर्नुहोला । गाडी घोडा आदि पक्षमा पनि गोचर ग्रहले त्यति साथ दिएको छैन । बाहन किन्नै परे पनि शुभ मुहूर्त एवं बलियो दिन पारेर मात्रै किन्नु होला । बढी महत्त्वपूर्ण ठानिएको पारिवारिक समन्वयमा पूर्ण सहमति आउन मुस्किल देखिन्छ । यो कुरा मनन् गरेर संयम नअप्नाए अनावश्यक विवाद एवं किचलोमा पर्नसकिने छ । पार्टनरसिपमा सावधानी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
वर्षको उत्तरार्धबाट अल्लि संयम अप्नाउनु उचित हुनेछ । विशेष गरी माइग्रेन, अपस्मार आदि शिर तथा मस्तिष्कसँग सम्बन्धित समस्या देखिनसक्ने छ भने तत्सम्बन्धी रोगीलाई रोग बढ्नसक्ने छ । यसै गरी थायराइड आदि ग्रन्थीरोग, गर्भाशय, प्रोष्टेड ग्रन्थी आदिको समस्या देखिनसक्ने संभावनालाई पनि गोचर ग्रहले संकेत गरिरहेको छ । आफ्नो स्वास्थ्यको साथमा मान्यजन तथा पारिवारिक कष्ट एवं दाम्पत्यकष्टको कुरालाई पनि नकार्नसकिन्न ।
बढी अपेक्षित यात्रामा केही अवरोध आउने लक्षण छ । विशेष यात्रा संपादन गर्दा ग्रहउपचारको उपाय गरेरमात्रै गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अप्रत्यासित रूपमा विवादजन्य लफडाबाजीमा फसिनसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कतिपय अवस्थामा अघि नसरेको बुद्धिमानी हुनेछ ।
मेष राशि हुने व्यक्तिहरूले रातो, पहेंलो र सेतो रङ्गका चीज तथा सामाग्रीको प्रयोगबाट फाइदा गर्न सकिने छ । यसै गरी १, ५ र ९ अंकको प्रयोग विशेष फापकर हुने छ भने २ र ७ नं. मध्यम रहनेछ । ग्रहरत्न, रङ्ग र नं.को प्रयोग गर्दा जन्म कुण्डलीको लग्नानुसार कारकत्त्वको पनि विचार पुर्याएर गर्नु जरुरी भने हुनेछ ।
इष्टदेवको साधना, गुरुजनको आशीर्वाद, गो सेवा, भैरवदेवको वर्षभरी, वर्षको उत्तरार्धबाट माँ बगलामुखीको यसै गरी विद्यार्थीहरूले माँ सरस्वतीको र माघसम्म शनिमहाँकालको साथमा पवनपुत्र हनुमानजीको दर्शनभक्ति, उपाशना आराधना तथा दीनदुःखी श्रमिक वर्गलाई सहयोग गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले राहु केतुको वर्ष भरी, वर्षको मध्यपछि गुरु बृहस्पतिको र माघसम्म शनि ग्रहको शान्तिका उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु शान्तिदायक हुनेछ । विद्यार्थीहरूले वर्षको उत्तरार्धबाट माँ सरस्वतीको विशेष उपाशना गर्नु हितप्रद हुनेछ ।
वृष राशि (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो.)
वृष राशि हुनेहरूको लागि वि.सं. २०७९ सालको पहिलो खण्ड संघर्षको बाबजुत कुलीन प्रख्याति बढ्ने छ । केही अल्झनको बाबजुत कुलमा विशेष कामको संपादन हुनेछ । र परिश्रमिक कार्यमा सफलता पनि मिल्ने छ । शिरोरोग लगायत स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउने छ । विद्यार्थीहरूले भने अध्ययनमा साविकभन्दा बढी मेहनत गर्नसके मात्रै ईच्छित सफलता प्राप्त गर्नसकिने छ ।
कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, राजनीति, समाजसेवा, पेशागत कार्य एवं नोकरी आदिमा ग्रहले धेरै सकारात्मक प्रभाव देखाउन अल्लि नसकिरहेको हुनाले सम्बन्धित पक्षमा साविकभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ । गरिएका कारोबार उल्टिनसक्ने भय पनि देखिएकोले काम भयो भनेर ढुक्क नपरिहालेको राम्रो हुनेछ । गोपनीयताको पनि ख्याल पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ । विशेष महत्त्वपूर्ण कामकार्य एवं विषयमा सफलता पाउन संबन्धित ग्रहको उपचारका उपाय अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । ठूलो महत्त्वकांक्षाको कारण धन फस्ने र उठति हुन मुस्किल पर्ने भय छ । लुच्चाले धन खाइदिनसक्ने छन् निकै होसियारी अप्नाउनु होला ।
वर्षको मध्यतिरबाट अध्ययनअध्यापनमा सुधार आउने छ । विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले राम्रो मेहनत गरेर उचित सफलता प्राप्त गर्नसक्नु हुनेछ । केही ग्रह–उपचारका उपायहरू अवलम्बन गरी अघि बढ्नाले केही विशेष महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक आदि काममा सफलता पाउन सकिने छ । कुनै विशेष जागिर, उद्यम आदि पेशाकर्मको शुभारम्भ हुनेछ, भइरहेको नोकरी एवं पेशाकर्ममा पदोन्नति तथा स्तरोन्नति हुनजाने छ । नोकरीको पर्खाईमा रहेकाले जागिर पाउन सकिने छ । कर्मयोगीहरूलाई आकस्मिक विभिन्न खालका लाभ तथा उपलब्धि मिल्ने छ । कृषिजन्य पक्षमा पनि गोचरग्रहको प्रभाव तसै अनुकूल बढ्दै जानाले किसानलाई उपलब्धि वृद्धि हुनेछ । राजनीति समाजसेवा आदिमा पनि आंशिक सफलता मिल्ने देखिन्छ ।
सन्तानाभिलाषीहरूलाई सन्तानप्राप्ति हुनेछ, विदेश यात्राका अभिलाषीलाई समय अनुकूल बन्दै जानेछ । घरमा विवाह व्रतबन्धादि माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुनसक्ने छ भने कुटुम्ब तथा पारिवारिक सदस्य बढ्ने छन् । विवाह योग्य युवायुवतीको लागि विवाहगाँठो कसिने सम्भावना अधिक रहेको छ । प्रेमपारखीहरूको लागि पनि सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जाने देखिन्छ ।
वर्षान्ततिर पशुचौपायामा हानी गर्ने गोचर ग्रह छन्, ख्याल पुर्याउनु होला । रपनि खोटीदोषी पशुबाट तसै फाइदा गर्न सकिने छ । यो समयमा गाडी घोडा आदि पक्षमा पनि गोचर ग्रहले त्यति साथ नदिनसक्ने छ । बाहन किन्नै परे पनि शुभ मुहूर्त पारेर मात्रै किन्नु होला । पारिवारिक समन्वयमा ह्रास आउनसक्ने छ । यो कुरा मनन् गरेर संयम नअप्नाए अनावश्यक विवाद एवं किचलो पर्नेछ । पार्टनरसिपका कामकार्यहरू पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । सकेसम्म पार्टनसिपमा बल नगरेको राम्रो हुनेछ । यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर संबन्धित कार्य योजना तर्जुमा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
ढाडकमम्मरमा समस्या देखिनसक्ने छ, यसै गरी बाहिरी तथा आन्तरिक घाऊखटिरा, ज्वरो लगायतका स्वास्थ्य समस्याले पनि दुःख दिनसक्ने छन् । मधुमेह, उच्चरक्तचाप तथा हृदय रोग, दम आदिका दीर्घरोगीले विशेष सावधानी अप्नाउनु उचित हुनेछ ।
यो वर्ष वृष राशि हुने व्यक्तिहरूले सेतो, मध्यम रातो र निलो तथा ध्वाँसे एवं खरानी रङ्गका वस्तुबाट फाइदा गर्न सकिने छ । यसै गरी १, २ र ६ नं.को प्रयोग विशेष फापकर हुने छ भने ३ र ८ नं. मध्यम रहनेछ । ग्रहरत्न, रङ्ग र नं.को प्रयोग गर्दा जन्म कुण्डलीको लग्नानुसार कारकत्त्व पनि विचार पुर्याउन भने जरुरी हुनेछ ।
महादशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूलाई राशिफलमा बताइएका विपरितफल बढी घटित हुनसक्ने हुन्छ तसर्थ सम्बन्धितहरूले बढी सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ । ग्रहगोचरको प्रतिकूलतालाई मनन् गरी सकारात्मक सोंचका साथमा निस्कामकर्म गर्ने, ध्यानधारणा तथा इष्टदेवकोसाधना बढाउने, महादशामा चलेका दशा अन्तर्दशाको शान्ति गर्ने र साथमा महावीर पवनपुत्र हनुमान र भैरवदेवको उपाशना गर्ने गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले शनि एवं राहुको वर्ष भरी नै र वर्षको मध्यसम्म गुरु बृहस्पतिको उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु फापकर हुनेछ ।
मिथुन राशि (का.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह.) मिथुन राशिको लागि वि.सं. २०७९ सालको माघसम्म अढैया शनिको विपरित असर छ । तथापि वर्षको पूर्वार्धमा संघर्ष एवं स्वास्थ्यमा विभिन्न सिकायतको बाबजुत व्यापार व्यवसायबाट राम्रो लाभ हातपार्न सकिने छ । भने उद्योगधन्दा फस्टाउने छ । जागिरमा पदोन्नति हुनेछ । रोजगारीको खोजिमा रहेकाहरूलाई नोकरी मिल्ने छ । केही समस्याको बाजुत सन्तानाभिलाषीका लागि सन्तानको प्राप्ति हुनेछ । विवाह योग्य युवायुवतीको लागि लगनगाँठो कसिनसक्ने छ । प्रेमसम्बन्धमा पनि मधुरता बढ्ने छ । एब्रोडस्टडि तथा अन्य वैदेशिक यात्राको पर्खाईमा रहनेहरूको लागि पनि यो वर्ष अनुकूल यात्राप्रद रहने छ ।
यो वर्ष तपाईको पुण्यको फल उदाउने हुनाले घरपरिवारमा धार्मिक आध्यात्मिक एवं माङ्गलिक कार्य संपादन गर्नसकिने छ । तीर्थाटनको अवसर पनि मिल्ने छ । आत्मज्ञानको खोजीमा रहेका मुमुक्षुहरूको लागि ब्रह्मज्ञानी गुरुजनबाट दिक्षित हुने सौभाग्य मिल्ने छ । सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढेर जानेछ । कर्मक्षेत्रबाट आकस्मिक लाभ गर्न सकिने छ ।
तपाईलाई यो वर्ष घरघडेरी तथा जग्गाजमिन एवं वरवाहान जोडाउन मद्दत पुर्याउने ग्रहगोचर परिषद्को राय देखिन्छ । पशु चौपायाबाट पनि लाभ हातपार्नसकिने छ । कलासङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि यो वर्ष राम्रो प्रख्याति बटुल्नसक्नु हुनेछ । राम्रो धनार्जनको साथमा प्रदेशी घर फर्कन पाइने छ ।
स्वास्थ्यमा अझैपनि झिकझ्याक हुनसक्ने ग्रहगोचर छ, आहारविहार एवं दीर्घरोगीले औषत्रधोपचारमा ख्याल पुर्याउनु नै उचित हुनेछ । वर्षको मध्यपछि सन्तानको पक्षमा ग्रहगोचरले त्यति अनुकूलता दिनसकिरहेको देखिँदैन । जसले गर्दा सन्तानको पक्षबाट केही असन्तोष व्यहोर्न पनि सक्ने छ । गर्भावस्थामा रहेका दम्पतिले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । महादशा अन्तर्दशा योगिनीदशामा प्रतिकूल दशा चल्नेहरूले विशेष सावधानी अप्नाउन जरुरी देखिन्छ । वर्षान्ततिर भइसकेको कारोबार उल्टिनसक्ने भय देखिन्छ ।
यद्यपि ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा जन्म कुण्डलीको लग्नानुसार पनि कारकत्त्व विचार पुर्याउन जरुरीे हुन्छ । रपनि राशिको आधारमा आफूलाई फाप्ने रङ्ग र नं जान्न चाहनुहुन्छ भने सामान्यतया मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले हरियो, निलो, सेतो र कालो रङ्गको प्रयोग अथवा वस्तुबाट फाइदा गर्न सक्नु हुने छ । यसै गरी २, ३ र ७ अङ्कको प्रयोग विशेष फापकर हुने छ भने ९ अङ्कको प्रयोग मध्यम रहनेछ ।
यो वर्ष मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले महाकालशनिमृत्युञ्जयको पाठको साथमा पवनपुत्र हनुमान र भैरवदेवको साथै वर्षको मध्यबाट माँ बगलामुखी एवं विद्यार्थीले माँ सरस्वतीको श्रद्धाभक्ति, जपपाठ, स्तुति गर्नु वा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले शनि र केतुको साथै वर्षको मध्यउपरान्त गुरु बृहस्पतिको शान्ति उपाय अवलम्बन गर्नु शुभकर हुनेछ । यसैगरी महादशा, अन्तर्दशा एवं योगिनीदशामा प्रतिकूल दशा चल्नेहरूले सम्बन्धित दशाको विशेष शान्तिका उपाय गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कर्कट राशि (हि.हु.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो.) कर्कट राशि हुनेहरूको लागि वि.सं. २०७९ सालको वर्षको मध्यसम्म गुरु बृहस्पति, यसै गरी वर्षभरी नै शनि, राहु र केतु ग्रह विपरित अवस्थामा रहेका छन् । ग्रह गोचरको यो स्थितिले यहाँलाई यो वर्ष शुरुमा अक्रोश एवं तनाब र दौडधूप बढाउने छ । भइसकेको कुनै कारोबार उल्टिएर वेचैनी दिनसक्ने छ । लुच्चो चरित्रको व्यक्तिको हातमा धन जाने र त्यसको उठतीको सुनिश्चितता नहुँदा त्यसले ठूलै मनोभय ल्याउने तथा मनोवैज्ञानिक असर हुनसक्ने छ, समयमै होसियारी अप्नाउनसके बुद्धिमाने हुनेछ ।
पितृमातृ एवं मान्यजनलाई पिर्ने ग्रहगोचर छ । आफ्नै स्वास्थ्यमा पनि कष्ट हुने संकेतहरू प्रसस्तै देखिन्छ । पैतृक संपत्ति, साँधसीमा आदि विषयमा किचलो हुने, छरछिमेक तथा साँध सँधियार, साथी भाइबीच असमझदारी बढ्ने र पारिवारिक समझदारी कायम हुन नसक्ने जस्ता स्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ । जग्गाजमिन तथा घरघडेरीको किनबेच आदिमा समेत सचेत हुन जरुरी छ । स्वास्थ्यमा ग्रन्थीलगायतका रोगले दुःख दिने छन् । चोटपटक दुर्घटना एवं घाऊखटिराको भय पनि देखिएकोले सावधानीपूर्वक संबन्धित कार्य संपादन गर्नु उचित हुनेछ ।
छलकपटजन्य व्यवहारमा फसाउने गोचर रहेकोले प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा विचार पुर्याएर मात्रै अघि बढ्नु उचित हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा कष्ट एवं शंकाआशंका उब्जनसक्ने सम्भावना छ ।
ईज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खालको अवैध तथा कैफियत आम्दानी तर्फ मन आकर्षित हुनसक्ने खतरा छ, निकै सावधानी र संयम अप्नाउनु होला । पशुचौपाया, बरबहान तथा गाडी आदि सवारीसाधन खरिदको लागि यो समय त्यति अनुकूल नदेखिएकोले सकेसम्म खरिद नगरेकै राम्रो हुनेछ, कथंकदाचिन खरिद गर्नैपर्ने छ भने वर्षको मध्योपरान्त तसै अनुकूल हुनेछ ।
महादशा अन्तर्दशा योगिनीदशामा प्रतिकूल दशा चल्नेहरूले विशेष सावधानी अप्नाउन जरुरी देखिन्छ । कुसंगतको चक्रव्यूह नपर्ला भन्न सकिन्न । नहुने काममा मन जाने र नोक्सानी भइसके पछि बल्ल होश खुल्ने छ । गुरुजन, मान्यनजको अर्ति नमान्दा पछि पछुतोमा परिने छ । जालसाँची तथा किर्तेकार्यमा फसाउन खोज्नेहरूको षड्यन्त्रमा फसिन सकिने छ होसियारी अप्नाउनु होला । मुद्धामामिलाको भय पनि छ । ग्रहले ऋणवृद्धि गराउन खोज्दैछ, गरिने कामकार्यमा निकै विचार पुर्याएर गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
धर्माचरण एवं इष्टसाधनाको बलले कतिपय ग्रहगोचरजनित अनिष्ट फललाई टार्न पनि सकिने हुनाले उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ, जसबाट आकस्मिकरूपमा केही शुभफल पनि प्राप्त गर्न तथा अशुभफललाई घटाउन सकिने छ ।
वर्षको मध्यपछि विशेष कामको जमर्को हुने तर, गरिपुर्याउन कठिनपर्ने हुनेछ । सफलताको लागि जन्मकुण्डलीमा गुरु बृहस्पति कारक रहेको हकमा राम्रो खालको पुष्पराजको धारण गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । जसबाट विद्या क्षेत्रमा केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अन्यपक्षमा पनि क्रमिक रूपमा केही सुधार भएर जानेछ, रोगीलाई उपचार लाग्न थाल्ने छ । ठूला अड्चनहरू हट्दै जाने छन् । व्यापार व्यवसाय एवं नोकरी आदि पेशागत क्षेत्रमा पदप्रतिष्ठा, आयआम्दानी बढेर जाने छ ।
विषयान्तरतिर लागेर समय खर्चनुभन्दा समयको सदुपोग गरी कर्मयोगलाई महत्त्व दिए काम बनाउन र लाभ उठाउन सकिने छ । विशेष ठानिएको काममा भने अल्झन आउनसक्ने देखिएकोले ग्रह उपचारको उपाय अप्नाउनु उचित हुनेछ ।
अध्ययनमा शिक्षण संस्था एवं विषय परिवर्तनको ईच्छा हुने संभावना देखिएको छ । रोजगारीको लागि साविकभन्दा बढीनै उपाय गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीति समाजसेवा आदिमा केही आलोचना तथा अपयशको बाबजुत आंशिक सफलता मिल्ने छ ।
अनिष्ट ग्रहफललाई हटाउन तथा शुभफललाई बढाउन कर्कट राशिले यो वर्ष वर्ष भरीनै इष्टदेवको साथमा महावीर हनुमान एवं भैरवदेवको साथै वर्षको मध्यसम्म माँ बगलामुखी एवं विद्यार्थीले माँ सरस्वतीको स्तुति आराधना उपाशना अवलम्बन गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले शनि र राहु एवं केतुको वर्ष भरी र वर्षको मध्यसम्म गुरु बृहस्पतिको शान्तिका उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु हितकर हुनेछ ।
सिंह राशि (म.मि.मु.मे.मो.ट.टि.टु.टे.) सिंह राशिका व्यक्तिहरूको लागि वि.सं.२०७९ को साल वर्षको पहिलो खण्डमा कुनै ग्रहले साथ दिने त कुनै ग्रहले अवरोध पनि गर्ने भूमिकामा ग्रहहरू देखिएको हुनाले विशेष उपाय अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विशेष उपायको साथमा अघि बढ्नाले विशेष उन्नतिप्रगति गर्नसकिने छ । गोचरग्रहको सकारात्मक प्रभाव रहने हुनाले विद्यार्थीले पढाईमा बढी समय दिनु उचित हुनेछ । रोकिएर रहेको अध्ययनलाई पूरा गर्न सकिने छ । उद्यम व्यावसायमा उन्नति प्रगति हुनजाने छ । खेलकुद लगायत प्रतिस्पर्धाजन्य कार्यमा सफल भइने छ । राजनीति समाजसेवा आदिमा पनि सफलता मिल्ने छ । वैदेशिक यात्राको पर्खाइमा रहेकाहरूको लागि पनि समय अनुकूल रहने छ । विवाहयोग्य युवायुवतीको वैवाहिक सम्बन्ध जोडिने छ । विवाहितहरूको दाम्पत्यसम्बन्धमा माधुर्यता बढ्ने छ ।
घरपरिवारमा माङ्गलिक आदि धार्मिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक कार्यक्रम संपादन हुनजाने छ । व्यापार व्यावसाय एवं उद्योगधन्दा फस्टाउने छ । कुनै विशेषखालको उद्यमको शुरुवात गर्नगराउन गोचरग्रहले सपोट गरिरहेको छ । यसै गरी टाढिएका प्रेमीप्रेमिकाको मिलन हुनेछ । अवरोधक बनेका ग्रहको विशेष उपाय गरी अघि बढेको खण्डमा तपाईलाई यो समयमा दिग्विजय प्राप्त गर्ने योग बनेको छ । निकै विवेक पुर्याएर कर्मयोग गर्नुहोस् ।
गृहनिर्माण गर्ने, जग्गाजमिन एवं वरवाहन तथा साधन जोड्ने जस्ता शुभफललाई गोचरपरिषद्ले साथ दिएको छ । वेरोजगारलाई जागिर मिल्ने छ भने, जागिरेलाई पदोन्नति हुनेछ । समाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रख्याति बढेर जाने छ । पशुपालन तथा कृषिकर्मबाट लाभ हुनेछ ।
वर्षको मध्य–उपरान्त गोचर स्थिति अल्लि खस्किने देखिएको छ । केही विपरित फलको सामना गर्नुपर्ने छ । महादशा अन्तर्दशा योगिनी दशा आदिमा प्रतिकूल दशा चल्नेहरूलाई मातृपितृ एवं मान्यजनलाई पिर्नसक्ने देखिन्छ । आफ्नै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता नआउला भन्नसकिन्न । छाती, हात, खुट्टा एवं ढाडकम्मरसम्बन्धी समस्या देखिनसक्ने छ ।
मधुमेह, उच्चरक्तचाप तथा हृदयरोग, यक्ष्मा जस्ता दीर्घरोगीलाई सास्ती बढ्नसक्ने भय देखिएकोले बढी नै सावधानी अप्नाउनु पर्ला । दाजुभाइमा कष्ट तथा विवाद, पारिवारिक असमझदारी, कार्यक्षेत्रमा अवरोध, आलोचना, द्वन्द एवं कामकार्यमा विलम्बता जस्ता प्रतिकूल स्थितिको सृजना हुने तथा विपरित प्रभावको सामना गर्नपर्ने छ ।
सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूले रातो, सेतो र पहेंलो रङ्गको प्रयोग अथवा वस्तुबाट फाइदा गर्न सक्नु हुने छ भने हरियो रङ्गको प्रयोग मध्यम रहने छ । यसै गरी १, ५ र ९ अङ्कको प्रयोग विशेष फापकर हुने छ भने २ र ६ अङ्कको प्रयोग मध्यम रहनेछ । ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा जन्म कुण्डलीको लग्नानुसार कारकत्त्वको पनि विचार पुर्याउन जरुरी भने हुनेछ ।
सिंह राशिका व्यक्तिहरूले यो वर्ष भरी भैरवदेवको र वर्षको मध्यपछि माँ बगलामुखीको साथमा पितृ एवं कुलदेवताको र वर्षान्ततिरबाट पवनपुत्र हनुमानजीको यसै गरी विद्यार्थीहरूले माँ सरस्वतीकोसेवा आराधना उपाशना गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले राहु को वर्ष भरी नै, केतुको वर्षको मध्यसम्म र वर्षको मध्यपछि गुरु बृहस्पतिको साथै वर्षान्ततिरबाट शनि ग्रहको शान्तिका उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु हितकर हुनेछ ।
कन्या राशि (टो.प.पी.पु.ष.ण.ठ.पे.पो.) कन्या राशिको लागि वि.सं. २०७९ सालको वर्ष पूर्वखण्डमा कामकार्य संपादन तथा जनव्यवहारमा सजग हुनु उचित हुनेछ । कैफियत कर्मतर्फ पनि चेष्टा बढ्नसक्ने र पछि पछुतो हुने भय पनि रहेकोले विशेष संयमित रहनु उचित हुनेछ । कामकार्यमा साविकभन्दा बढी संघर्ष उठाउनु पर्ने देखिन्छ । विपरित ग्रहको उपाय एवं गुरुजनको आशीर्वाद लिएर अघि बढेको खण्डमा बढी जोड गरिएको काममा केही अवरोधको बाबजुत केही सफलता पनि प्राप्त गर्नसकिने छ ।
अत्यावश्यकभन्दा बढी साथसँगत तथा जनसंपर्कमा नरहेकै बुद्धिमानी हुनेछ । मुद्धामामिला आदिको सामना गर्नपर्ने र बढी सास्ती उठाएरमात्रै सफल भइने छ । महामारी आदि संक्रामक समस्याले स्वास्थ्यमा पनि दुःख दिने भय छ । तरिका नमिल्दा गरिएका पुरुषार्थ खेरा जानसक्ने भएकोले उचित ग्रहउपचारका उपाय अवलम्बन गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी एवं उपलब्धिकर हुनेछ । महादशा अन्तर्दशा योगिनी दशा आदिमा प्रतिकूल दशा चल्नेहरूलाई यस्ता विपरितफल बढी घटित हुनसक्ने छन् ।
वर्षको उत्तरार्धतिरबाट भने अनुकूलता बढ्ने छ । अध्ययनमा गोचरग्रहको सकारात्मक प्रभाव बढ्ने हुनाले विद्यार्थीले पढाईमा बढी समय दिएर सफलता प्राप्त गर्नसकिने छ । रोकिएर रहेको अध्ययनलाई पूरा गर्न सकिने छ । उद्यम व्यावसायमा उन्नति प्रगति हुनजाने छ । खेलकुद लगायत प्रतिस्पर्धाजन्य कार्यमा सफल भइने छ । राजनीति समाजसेवा आदिमा पनि सफलता मिल्ने छ । यात्रापक्ष पनि सवल बन्ने हुनाले वैदेशिक यात्राको पर्खाइमा रहेकाहरूको लागि पनि समय यात्रानुकूल बन्ने छ । प्रदेशीलाई कमाई बोकेर घर फर्कने अवसर मिल्ने छ । विवाहयोग्य युवायुवतीको वैवाहिक सम्बन्ध जोडिने छ । विवाहितहरूको दाम्पत्य सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ ।
घरपरिवारमा समझदारी बढ्ने छ । गृह निर्माण हुने तथा जग्गासम्बन्धी कारोबार हुने योग छ । रोजगारीको प्रतिक्षामा रहनेहरूलाई जागिर मिल्ने छ । जागिरेलाई पदोन्नति हुनेछ । धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा सफलता मिल्ने छ, तीर्थयात्रा हुनसक्ने देखिन्छ । पशुचौपाया, कृषि फार्मिङ्ग आदिबाट पनि लाभ मिल्ने छ, किसान पेशाकर्मीले स्वकर्मक्षेत्रमा कर्मयोग बढाएर बढी फाइदा उठाउनसकिने छ । व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा तथा पेशाक्षेत्रमा स्तरोन्नति हुनजाने छ ।
उन्नति प्रगतिको कारण आर्थिक लाभ पनि बढेर जानेछ । धैर्यतापूर्वक कर्मयोगलाई जारी राख्नाले अपेक्षित कार्यमा सफलता मिल्ने छ । नीति, सिद्धान्तमा भने विचलन नआउला भन्न सकिन्न तसर्थ आफ्नो निष्ठामा अडान लिनु उचित हुनेछ । माघसम्म सन्तानपक्ष कष्टकर देखिएको छ । कष्ट तथा अन्तद्र्वन्द नहोला भन्नसकिन्न । गर्भावस्थामा रहेका दम्पतिले अल्लि बढी ख्याल पुर्याउन जरुरी पर्नेछ । रपनि वर्षको मध्यतिरबाट क्रमशः केही दोषको बाबजुत छोराछोरीको तर्फबाट सुख एवं सन्तोष मिल्न थाल्ने छ । वर्षान्ततिर सन्तानाभिलाषीलाई सन्तान प्राप्तिको योग पनि बनेर गएको छ ।
कब्जियत, अर्श अथवापाइल्स, अल्सर, लिभर, पाचनतन्त्रको समस्या आदि पेटरोगका सिकायत हुनसक्ने देखिन्छ । उच्चरक्तचाप, मधुमेह, यक्ष्मा तथा हर्मोनिक रोगका रोगीहरूलाई पनि बढी सास्ती मिल्ने छ, सावधानी अप्नाउनु उचित हुनेछ ।
यो वर्ष कन्या राशिका व्यक्तिहरूले इष्टदेवताको साथमा महावीर हनुमान एवं भैरवदेवको साथमा वर्षको मध्यसम्म माँ बगलामुखी तथा विद्यार्थीले माँ सरस्वतीको श्रद्धाभक्ति उपाशना आराधना गर्नु, यसै गरी विद्यार्थी बालबालिकालाई पाठ्य सामाग्री दान दिनु, गाईको सेवा गर्नु, मजदुरको सम्मान तथा सहयोगमा भूमिका निर्वाह गर्नु फापकर हुनेछ । अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले राहु एवं केतुको वर्षभरी, यसै गरी वर्षको मध्यसम्म गुरु बृहस्पतिको र माघसम्म शनि ग्रहको शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
साथै कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले हरियो, मध्यम रातो र निलो तथा कालो रङ्गको वस्तुबाट फाइदा लिन सकिने छ । यसै गरी १, २, ३ र ६ अङ्कको प्रयोग विशेष फापकर हुने छ भने ७ अङ्कको प्रयोग मध्यम रहनेछ । ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा जन्म कुण्डलीका केन्द्र त्रिकोण अनुसार कारकत्त्व विचार पुर्याउनु उचित हुने कुरालाई मनन् गर्न जरुरी भने हुनेछ ।
तुला राशि (रा.री.रु.रे.रो.त.ति.तु.ते.)
तुला राशिको लागि नयाँ वर्ष वि.सं. २०७९ सालको पूर्वखण्ड तसै अनुकूल देखिएको छ । तर, खास उपलब्धि दिन ग्रहगोचरले अल्लि अलमल गर्दैछ । विशेष महत्त्वपूर्ण कामलाई पूर्ण गर्न विशेष खालकै ग्रहउपचारको उपाय गरेर मात्रै कार्यसंपादन गर्नु पर्ला । अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन आदिमा सुधार आउने छ । सन्तानाभिलाषीलाई सन्तान प्राप्ति हुनेछ । भएका सन्तानको बाटोबाट सुखसन्तोष मिल्ने छ । विवाह योग्य युवायुवतीको विवाहबन्धन गाँसिने योग जुरेको छ । पेशागत उन्नति प्रगति हुनगइ आर्थिक पक्ष केही बलियो हुनेछ ।
अल्लि विशेष तयारी गर्नाले वेरोजगारीलाई रोजगारी मिल्ने छ । जागिरेलाई पदोन्नति हुनेछ । संघर्ष तथा केही अवरोधको बाबजुत धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा आंशिक सफलता मिल्ने छ, तीर्थयात्राको पनि संयोग जुट्नसक्ने छ । दलालीकरणबाट बचेर विदेश यात्राको प्रोसेज गर्नाले वैदेशिक यात्राको बाटो हेरिरहेकाहरूको यात्रा तय हुनेछ ।
वृश्चिक राशि (तो.ना.नि.नु.ने.नो.य.यी.यु.) वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि नयाँ वर्ष वि.सं. २०७९ साल अल्लि अलमले वर्ष रहेको छ । वर्षको पूर्वार्धको अपेक्षामा उत्तरार्ध बढी फलदायी रहने छ । वर्षको पहिलो खण्डमा गोचरग्रह परिषद्मा केही ग्रहसदस्यहरू विपरित रहेकाले केही संघर्षप्रद रहने कुरालाई नकार्न सकिन्न । साविकभन्दा अल्लि बढी मेहनत गरेर आंशिक उपलब्धि प्राप्त गर्नसकिने छ । प्रतिकूल ग्रहहरूको उपचारको उपाय गर्नाले उद्यम व्यवसायमा केही उन्नति हुनजाने छ । दाम्पत्य तथा प्रेम जीवनमा देखिएको असहजता हट्ने र समझदारीको वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
बढी अपेक्षा एवं चाहना र आसक्ति गरेको कामलाई पूर्णता दिन बढी सास्ति भोग्नपर्ने हुन्छ । खासै महत्त्व नपाएको काम भने बनेर गर्जो टर्नेछ । पारिवारिक, छरछिमेक, समाज, सहकर्मी आदि पक्षमा साथ सहयोगको अपेक्षा कम गरेको सुखकर हुनेछ ।
महादशा अन्तर्दशा एवं योगिनीदशा आदिमा अकारक तथा प्रतिकूल दशा चल्नेहरूलाई पारिवारिक कष्ट तथा रोगशोकको भय छ । जग्गा तथा घरघडेरीको किनबेचको कामकार्यमा अल्लि सावधानी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । वादविवाद तथा मुद्धामामिला पर्नसक्ने संभावना भएकोले जनव्यवहारमा सजग रहनु उचित हुनेछ ।
दाजुभाइबीचको सम्बन्ध टाढिनसक्ने देखिन्छ । सञ्चित धनको खर्च हुने तथा सरसापट्टी दिएको धन नफर्कने जोखिम छ । विधर्मी लुच्चाले धन ठग्ने योग परेको हुनाले लेनदेनमा निकै ख्याल पुर्याउनु होला ।
वर्षको उत्तरार्धबाट चारमहिना जति सुविस्ता महसूस हुनेछ । ग्रह उपचारका उपायहरू अप्नाएर अघि बढ्दा सफलता हातपार्न सकिने छ । अध्ययनमा पनि अनकूलता बढ्ने छ । विवाह योग्य युवायुवतीको विवाहबन्धनको लगनगाँठो कसिने छ । पेशागत उन्नति प्रगति हुनगइ आर्थिक पक्ष पनि बलियो हुनेछ ।
विरोधीहरूको अवरोधको सामना गर्न परिरहे पनि साहस र हिम्मतले साथ दिनेछ । होसियारीपूर्वक नबिराउने र नडराउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नाले केही पुरुषार्थ गर्नसकिने छ । संघर्ष एवं द्वन्दको बाबजुत न्यायिक विजय मिल्ने छ । कलाकारको लागि पनि यो समयमा उपलब्धि हासिल हुनेछ । कैफियत आम्दानीतर्फको चेष्टालाई संयम गरेको बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा पछि पछुतोमा परिने र ईज्जत प्रतिष्ठामा पनि दागीलाग्न सक्ने भय रहने छ ।
राजनीतिक भूमिका तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । कृषि, पशुचौपाया आदि क्षेत्रमा छोटो समयलाई तसै अनुकूल मान्नसकिन्छ ।
महादशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक ग्रहको दशा चल्नेहरूलाई पिनाश, माइग्रेन, थायराइड, पौरुष ग्रन्थी, हर्मोनिक डिस्ब्यालेन्स, हात, छाति एवं घाँटी आदिमा समस्याको भय छ । आहार विहारमा सजग हुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
यद्यपि ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा राशिको आधारमा मात्र नभएर जन्म कुण्डलीका केन्द्र त्रिकोण अनुसार कारकत्त्व विचार पुर्याउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुनेछ । रपनि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले रातो, सेतो, पहेंलो रङ्गको प्रयोग अथवा यी रङ्गका वस्तुको प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिने छ । यसै गरी अङ्कमा २, ४ र ५ अङ्कको प्रयोग विशेष फापकर हुने छ भने १ र ३ अङ्कको प्रयोग मध्यम रहनेछ ।
यस वर्ष वृश्चिक राशिका व्यक्तिले भैरवदेव एवं छिन्नमस्ता देवी र वर्षको मध्यसम्म माँ बगलामुखी एवं विद्यार्थीले माँ सरस्वतीको साथै वर्षान्ततिरबाट पवनपुत्र महावीर हुनमान र माँ भगवतीको उपाशना तथा दर्शनभक्ति गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले वर्ष भरी केतु र वर्षको मध्यसम्म गुरु बृहस्पतिको साथै माघ उपरान्त शनि ग्रहको उपयुक्त शान्तिका उपाय अवलम्बन गर्नु शुभकर हुनेछ ।
धनु राशि (ये.यो.भ.भि.भु.ध.फ.ढ.भे.)
धनु राशिको लागि वि.सं. २०७९ साल भाग्यभन्दा पनि कर्मलाई महत्त्व दिनपर्ने खालको रहेको छ । अपेक्षित कामकार्यलाई पूरा गर्न मेहनत बढाउनु पर्ने हुन्छ । प्रतिकूल ग्रहहरूको उपचारको उपाय गर्नाले उद्यम व्यापार व्यवसायमा केही उन्नति गर्नसकिने छ । रपनि वर्षको पूर्वार्ध अर्थात शुरुका पाँच छ महिना तसै राहतप्रद रहने छन् । यद्यपि बढी आसक्ति गरेको विशेष महत्त्वपूर्ण कामलाई पूरा गर्न संघर्ष पर्नेछ । सञ्चितधनको खर्च, साविकभन्दा बढी फजुल यात्रा, मिथ्याऽपवाद अथवा झुटो लाञ्छना, आफैलाई तथा परिवारमा पनि रोगशोकको सामना जस्ता विपरितफलको बाबजुत सामान्यतया पदप्रतिष्ठा बढ्ने र पेशा तथा उद्योगधन्दामा प्रगति हुनगई आर्थिक उन्नति हुनेछ । कृषि एवं पशुपालनबाट पनि केही लाभ उठाउन सकिने छ । अल्लि बढी तयारी गर्नाले रोजगारीको अवसर मिल्ने छ ।
गोचरग्रह परिषद्मा केही ग्रहसदस्यहरू विपरित रहेकाले केही संघर्ष अनुभव हुने नै छ । अध्ययन अध्यापनमा बढी नै परिश्रम गर्नुपर्ला, अन्यथा रोकावट तथा विषय परिवर्तनको संभावनालाई नकार्नसकिन्न ।
वर्षको उत्तरार्धबाट स्थिति अल्लि थप कठिन पनि बन्नसक्ने छ । विद्वतताको अहं र आत्मप्रसंशाको मनोविज्ञानको कारण मुल्याङ्कनमा गिरावट आउने छ । कतिपय अवस्था तथा व्यवहारमा कर्तव्य एवं जिम्मेवारी निभाउन पर्ने ठाऊँमा चुकिन पनि सकिने छ ख्याल पुर्याउनु होला । निस्कामकर्मको सिद्धान्तले अवसरको सदुपयोग गर्दै स्वकर्ममा रत् रहनसकेमा तत्काल नभए पनि भविष्यमा उपलब्धि लिनसकिने छ । हिम्मत पनि नगिराउने र नविराउने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नु तपाईको लागि बुद्धिमानी हुनेछ।
महादशा, अन्तर्दशा, योगिनी दशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूलाई वादविवाद, अपयश, मुद्धामामिला, कामकार्यमा अबरोध, मानप्रतिष्ठामा आँच, स्वास्थ्यमा समस्या, अपखबर र परिबन्दनीय परिस्थिति जस्ता विभिद् प्रतिकूलता पर्नसक्ने छ । सन्तानकष्ट तथा छोराछोरीको बाटोबाट असन्तोष पर्ने भय छ । गर्भावस्थाका दम्पत्तिले विशेष ख्याल पुर्याउन पर्ने हुन्छ । विश्वासघाती चक्रब्यूह, कुलती कुसंगत, विपरित खानपान आदिको भय पनि देखिन्छ । गुप्त रोग, शिरशुल, माइग्रेन, पिनास, नाककान घाँटीका समस्या, दन्तरोग, अर्श (पाइल्स), ग्रन्थी रोग (गाँठागुँठी बढ्ने), प्याङ्क्रियाज, मिर्गौला, थायराइड, पौरुष ग्रन्थी, वातव्याधि जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने छ । उच्चरक्तचाप, मधुमेह, यक्ष्मा आदि दीर्घरोगी लगायत सम्बन्धितहरूले आहार विहार एवं नियमित औषधोपचारमा विशेष ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
वर्षान्त अर्थात माघ महिनाको अन्तिमबाट तपाईलाई साढेसाती शनिदशा सकिने छ जसको कारणले रोकिएर रहेका धेरै कामकार्यहरूलाई पूर्णता दिनसक्नु हुनेछ । गुमेको मानसान र साख फर्काउन सकिने छ । प्रगति उन्नतिका ढोकाहरू खुलेर आउने छन् । विजय र सफलता मिल्ने छ । यशऐश्वर्य बृद्धि हुनेछ ।
यस वर्ष तपाईले इष्टदेवको साथमा माँ बगलामुखी, विद्यार्थीहरूले माँ सरस्वतीको र भैरवदेव एवं माँ छिन्नमस्तादेवीको वर्षभरी, साथै माघमहिनासम्म महावीर हनुमानको भक्ति–स्तुति तथा श्रद्धा आराधना गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले गुरुबृहस्पति एवं राहुको वर्षभरी र माघसम्म शनिग्रहको शान्तिका उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभकर हुनेछ ।
जागिर पेशा व्यवसायिक कर्म आदिको शिलशिलामा घर बाहिर अथवा देश विदेश कहीँ पनि हुनुहुन्छ र ग्रहशान्तिजन्य कर्मकाण्डी विधिविधान गर्न सम्भव हुँदैन भने पनि बुबाआमा हुनेहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी सकिन्छ उहाँहरूको सेवा गर्नाले, लोपोन्मुख स्थानीय जातिका गाईको वंशलाई संरक्षण गर्ने हेतुले स्थापना भएका गौशालाहरूलाई सहयोग गर्नाले, दीनदुःखी असहाय, रोगी, असक्त, बालबृद्धहरूलाई सेवाको लागि सञ्चालन भएका निकायहरूलाई सहयोग गर्नाले साथै अहिंसा आदि सत्याचरणमा रहेर परोपकार एवं लोकहितको कर्म गर्नाले पनि ग्रहजनित दुस्प्रभावलाई कमगर्न सकिन्छ ।
कतिपय व्यक्तिललाई फाप्ने कलर एवं नं.को बारेमा जान्ने ईच्छा हुनसक्छ । यद्यपि ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा राशिको आधारमा मात्र नभएर जन्म कुण्डलीका केन्द्र त्रिकोण अनुसार कारकत्त्व विचार पुर्याउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुनेछ । तथापि राशिको आधारमा कलर र नं. जान्न चाहनुहुने धनु राशि हुने व्यक्तिहरूले पहेंलो, रातो र सेतो रङ्गको प्रयोग अथवा यी रङ्गका वस्तुको प्रयोग गर्नसक्नु हुनेछ । यसै गरी अङ्कमा १, ५ र ९ अङ्कको प्रयोग गर्नसक्नु हुनेछ ।
मकर राशि÷ऋबउचष्अयचल (भो.ज.जी.जु.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.ग.गी.)–
मकर राशि हुनेहरूका लागि यो वर्षको माघ महिनासम्म मध्यसाढेसाती शनि रहेको छ । साथै राहु र केतु ग्रहको स्थिति पनि अनुकूल देखिएको छैन । गुरु बृहस्पति भने वर्षको पूर्वखण्ड अनुकूल देखिएका छन् । जसले गर्दा मकर राशिको लागि वि.सं. २०७९ साल वर्षको पूर्वार्धमा संघर्षको बाबजुत तसै राहतप्रद रहने देखिन्छ । रपनि धेरै ईच्छाएको कामकार्य पूरा हुन कठिन पर्नेछ ।
मिथ्यापवाद अथवा झुटो लाञ्छना, आफैलाई तथा परिवारका सदस्यमा स्वास्थ्यकष्ट आदिको कारण रोगशोकको सामना जस्ता विपरितफलको बाबजुत सामान्यतया पदप्रतिष्ठा बढ्ने, अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने र पेशा तथा उद्योग एवं व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनगई आर्थिक उन्नति हुनेछ । अल्लि बढी तयारी गरेर आयोग लड्नाले सरकारी तथा प्राइभेट जागिरमा समेत रोजगारीको अवसर मिल्ने छ ।
कामकार्यहरूमा अड्चन र ढिलासुस्तिको अनुभव हुनेछ । कैफियत कार्यमा चेष्टा हुने र पछि पश्चातापमा पर्नसकिने भय पनि रहेको छ, जसबाट बच्नको लागि निकै संयमित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । जन्मकालमा संबन्धित ग्रह अनुकूल हुने कमै व्यक्तिहरूको लागि भने अपेक्षित कार्यमा अबरोध भएपनि संघर्षको बाबजुत अनपेक्षित रूपमा आकस्मिक लाभ एवं उपलब्धिहरू मिल्ने छन् ।
संगत, स्वजनबाट विश्वासघात, फसिने–ठगिने, नहुनेकार्यमा मन जाने र समय फुत्किसके पछि पश्चाताप पर्नेजस्ता फलको संकेत ग्रहगोचरले गरिरहेको हुनाले जनव्यवहारमा संयमित हुनु निकै आवश्यक देखिन्छ।
यसै गरी वातव्याधि, स्नायू तथा नशा रोग, ढाडकम्मर शिर मस्तिष्कमा समस्या, अल्सर, क्षय, चोटपटक एवं प्रोष्टेड बढ्ने, घाउखटिरा एवं पित्तविकार तथा ज्वरोप्रकोप, मिर्गौला लिभर गर्भाशय आदिमा रोगको सिकायत, थायरायड, स्तन विकार आदि स्वास्थ्य समस्याको जोखिम देखिएको छ । हृदयरोग, उच्चरक्तचाप, मधुमेह, दम जस्ता दीर्घरोगीहरू लगायत सम्बन्धित सबैले विशेषरूपमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु उचित हुनेछ ।
रपनि निस्काम कर्मको साधकको हकमा भने सामान्यतया उपयुक्त कर्मफल मिल्ने छ । थोरधेर लाभ एवं उपलब्धिको संभावना पनि छ । तर उन्माद् र मदहोश गर्नेको लागि प्रतिफल विपरित नै हुने देखिन्छ ।
कृषि एवं पशुचौपायाको पक्षलाई ग्रहले घच्च पुर्याउने लक्षण देखाइरहेको छ, साविकलाई निरन्तरता दिएर नयाँ लगानी नबढाएकै राम्रो हुनेछ । घरजग्गा खरिदबिक्रिको काममा पनि धेरै चासो नराखेको बुद्धिमानी हुनेछ, अन्यथा क्षतिखति बढ्ने संभावना देखिन्छ । घरपरिवारबाट टाढिने तथा विदेश प्रदेश जाने ईच्छा भने पूरा हुनेछ । विचार विवेक पुर्याएर वैवाहिक कार्य संपादन गर्नसकिने छ । यो राशिका प्राविधिक व्यक्तिहरूले भने यो वर्ष प्रगति तथा व्यवसायिक लाभ गर्नसकिने छ ।
महादशा, अन्तर्दशा, योगिनी दशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूलाई वर्षको मध्य उपरान्त वादविवाद, झैझगडा, मुद्धामामिला, कार्यमा अबरोध, मानप्रतिष्ठामा आँच, स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता, मान्यजनकष्ट, परिबन्दनीय परिस्थिति जस्ता विपरित फलको सामना गर्नपर्ने छ । षड्यन्त्र, कुलत तथा कुसंगत, विपरित खानपान आदिमा फसिने खतरा देखिन्छ । दुर्घटना, दैविक विपत्ति तथा धनजनको क्षतिखति पर्नसक्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
ग्रहको दुष्प्रभावलाई कम गर्न तपाईले यो वर्ष महाकालशनि मृत्युञ्जयको पाठको साथमा महावीर हनुमान, भैरवदेव एवं छिन्नमस्तादेवी र वर्षको उत्तरार्धमा माँ बगलामुखी एवं विद्यार्थीहरूले माँ सरस्वतीको दर्शन भक्ति एवं उपाशना गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले वर्षभरी शनि, राहु, केतु र वर्षको पछिल्लो खण्डमा गुरु बृहस्पतिको शान्तिका उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु शुभकर हुनेछ ।
कतिपय व्यक्तिललाई फाप्ने कलर एवं नं.को बारेमा जान्ने ईच्छा हुनसक्छ । यद्यपि ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा राशिको आधारमा मात्र नभएर जन्म कुण्डलीका केन्द्र त्रिकोण अनुसार कारकत्त्व विचार पुर्याउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुनेछ । तथापि राशिको आधारमा कलर र नं. जान्न चाहनुहुने मकर राशि हुने व्यक्तिहरूले निलो, पानी रङ्ग अथवा आंशिक सेतो र हरियो रङ्गको प्रयोग अथवा यी रङ्गका वस्तुको प्रयोग गर्नसक्नु हुनेछ । यसै गरी अङ्कमा १, २ र ६ अङ्कको प्रयोग गर्नसक्नु हुनेछ ।
कुम्भ राशि (गु.गे.गो.स.सी.सु.से.सो.द.)
कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि वि.सं. २०७९ साल वर्षको पूर्वार्धको तुलनामा उत्तरार्ध तसै अनुकूल देखिएको छ । पूर्वार्ध अलमल, संघर्षकर एवं केही विपरित महसूस हुनेछ । हार्मोनिक असन्तुलन, घाउखटिरा एवं पित्तविकार तथा संक्रामक ज्वरोप्रकोपको भय रहने छ । कामकार्यमा अड्चन तथा ढिलासुस्ति गराउने ग्रहगोचर छ, सामान्य कार्यले पनि बढी समय लिनेछ । पछि ईज्जतप्रतिष्ठमा प्रश्नचिह्न लाग्ने र पश्चातापमा पर्नसक्ने कैफियत कार्यमा चेष्टा हुनसक्ने खतरा छ जसबाट बच्न निकै संयमित हुनुपर्ला ।
आयको तुलनामा व्यय तथा खतिक्षति बढाउने ग्रहगोचरमण्डलको भूमिका देखिएको हुनाले विशेष सजगतापूर्वक जनव्यवहार एवं स्वकार्यको संपादन गर्नु उचित हुनेछ । रपनि आफ्नो आस्था एवं सिद्धान्तबाट विचिलित नभइ स्वकर्मशील रहनाले तसै उपलब्धि हातपार्न सकिने छ । निस्काम कर्मको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने र प्रतिकूल ग्रहदशाको उचित उपाय अप्नाउनेहरूलाई सामान्यतया उपयुक्त कर्मफल मिल्ने छ । थोरधेर लाभ एवं उपलब्धि पनि हुनेछ । तर प्रमाद् तथा मदहोश गर्नेको लागि भने प्रतिफल विपरित नै हुने खतरा रहने छ । जन्म समयमा शनि आदि ग्रह अनुकूल अर्थात कारक रहनेको हकमा भने अपेक्षित कार्यमा अबरोध भएपनि अनपेक्षित रूपमा आकस्मिक लाभ एवं उपलब्धिहरू तथा अप्रत्यासित लाभ एवं राजमान र अधिकार प्राप्ति हुनेछ ।
प्रदेश जाने, मुग्लान पस्ने, घरपरिवारबाट टाढा हुने जस्ता कार्यमा ग्रहको साथ तसै उपयुक्त देखिन्छ, दलालीबाट बचेर यात्रा संपादन गर्नु उचित हुनेछ । शत्रु प्रभाव बढ्ने गोचरयोग हुनाले लोकव्यवहार एवं कार्यक्षेत्रमा सावधानी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
वर्षको उत्तरार्धबाट कृषि एवं पशुपँक्षी पालन र कलाजन्य क्षेत्रबाट आवधिक लाभ मिल्ने छ । आकांक्षीले उचित तयारी गरी आयोग लडेको खण्डमा नोकरी मिल्ने छ । भइरहेको जागिरमा पदोन्नति हुनेछ । शिक्षाकारक ग्रह अनुकूल हुँदै गएकोले विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले अध्ययनमा सफलता प्राप्त गर्नसकिने छ । ब्याकपेपर हुनेहरूले पनि मेहनत बढाउँदा पास हुनसकिने छ । उद्योगधन्दा व्यापार व्यसाय आदि पेशामा पनि ग्रहगोचरले साथ दिने हुनाले राम्रो लाभांश हातपार्न सकिने छ ।
विवाहाकांक्षीहरूको नयाँ घरवार जोडिने योग छ, प्रेमपारखीहरूको लागि पनि समय अनुकूल रहने छ । गृहस्थीहरूलाई पारिवारिक सौहार्दता बढेर जानेछ । मुमुक्षुहरूको लागि आत्मज्ञानमा बृद्धि हुनेछ । घरघडेरी जोडिने तथा गृहनिर्माणको अवसर जुट्ने छ । प्रदेशिएको पारिवारको सदस्य घर फर्कदा पारिवारिक उमङ्ग बढ्ने छ । राजनीति समाजसेवा आदिमा सफलता एवं प्रतिष्ठा बढेर जानेछ ।
महादशा, अन्तर्दशा एवं योगिनीदशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूलाई अनुकूलताको तुलनामा केही बढी प्रतिकूल तथा संघर्षजन्य परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि धेरै पक्षमा सावधानी अप्नाउनु जरुरी हुनेछ । मिथ्याऽपवाद अथवा झुटो आरोप, मुद्धामामिला आइपर्ने खतरा छ, जसबाट बच्न कार्यक्षेत्र एवं जनव्यवहार आदिमा निकै संयम तथा होसियारी अप्नाउनु होला । दुर्घटना, दैविक विपत्ति तथा धनजनको क्षतिखति, परिबन्द, चोरी, राज्यबाट भय–कष्ट, गलत संगत, स्वजनबाट विश्वासघात, फसिने–ठगिने, नहुनेकार्यमा मन जाने र समय फुत्किसके पछि पश्चाताप पर्नेजस्ता फलको संकेत ग्रहगोचरले गरिरहेको छ ।
यसै गरी वातव्याधि, स्नायू तथा नशा रोग, शिर मस्तिष्कमा समस्या, अल्सर, क्षय, श्वासकाश, चोटपटक एवं प्रोष्टेड बृद्धि, मिर्गौला, लिभर, गर्भाशय आदिमा रोगको सिकायत, थायरायड, स्तन विकार आदि स्वास्थ्य समस्याको जोखिम देखिएको छ । हृदयरोग, उच्चरक्तचाप, मधुमेह, दम जस्ता दीर्घरोगीहरू लगायत सम्बन्धित सबैले विशेषरूपमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु उचित हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले यस वर्ष महाकाल शनिमृत्युञ्जयको पाठ, महावीर हनुमानको र वर्षको पूर्वार्ध माँ बगलामुखी यसै गरी विद्यार्थीहरूले माँ सरस्वतीको स्तुति आराधना उपाशना गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले वर्षभरी शनि र वर्षको पूर्वखण्डसम्म गुरु बृहस्पतिको शान्तिका उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नु शुभकर हुनेछ । साथै दीनदुःखी, गरीब, अनाथ, असाय एवं श्रमिक वर्गलाई सहयोग हुने काम गर्नाले पनि ग्रहजनित दुष्प्रभाव कम गर्न मद्दत मिल्ने छ ।
जागिर पेशा व्यवसायिक कर्म आदिको शिलशिलामा घर बाहिर अथवा देश विदेश रहनुको जस्ता विभिन्न कारणले ग्रहशान्तिजन्य कर्मकाण्डी विधिविधान गर्न सम्भव हुँदैन भने पनि बुबाआमा हुनेहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी सकिन्छ उहाँहरूको सेवा गर्नाले, लोपोन्मुख स्थानीय जातिका गाईको वंशलाई संरक्षण गर्ने हेतुले स्थापना भएका गौशालाहरूलाई सहयोग गर्नाले, दीनदुःखी असहाय, रोगी, असक्त, बालबृद्धहरूलाई सेवाको लागि सञ्चालन भएका निकायहरूलाई सहयोग गर्नाले साथै अहिंसा आदि सत्याचरणमा रहेर परोपकार एवं लोकहितको कर्म गर्नाले पनि ग्रहजनित दुस्प्रभावलाई कमगर्न सकिन्छ ।
कतिपय व्यक्तिललाई आफूलाई फाप्ने कलर एवं नं.को बारेमा जान्ने जिज्ञाशा राख्ने गर्नुहुन्छ । यद्यपि ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा राशिको आधारमा मात्र नभएर जन्म कुण्डलीका केन्द्र त्रिकोण अनुसार कारकत्त्व विचार पुर्याउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुनेछ । तथापि राशिको आधारमा कलर र नं. जान्न चाहनुहुने कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले निलो, कालो, हरियो र पानी रङ्ग अथवा आंशिक सेतो रङ्गको प्रयोग अथवा यी रङ्गका वस्तुको प्रयोग गर्नसक्नु हुनेछ । यसै गरी अङ्कमा २, ३ र ७ अङ्कको प्रयोग फापकर हुनसक्ने छ ।
मीन राशि (दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची.)
मीन राशि हुनेहरूको लागि वि.सं. २०७९ साल वर्षको पूर्वार्धको तुलनामा उत्तरार्ध सामान्य राहतप्रद रहने छ । पूर्वार्धमा आयको तुलनामा व्यय बढी हुनजाने देखिन्छ । अप्रत्यासित खतिक्षतिको जोखिमलाई पनि नकार्नसकिन्न । एउटा कामको लागि साँचेको धन अर्कोतिर खर्च गर्नपर्ने छ । स्वास्थ्यले पनि निऊ खोज्नसक्ने लक्षण देखिएको छ । हात छाती एवं नाककान घाँटीतिर स्वास्थ्य समस्या देखिनसक्ने छ । खर्च, धपडीपूर्ण यात्रा र अवमुल्यन आदि प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ग्रहगोचर परिषद्को अवस्था त्यति सकारात्मक नदेखिएको हुनाले विशेष सजगतापूर्वक जनव्यवहार एवं स्वकार्यको संपादन गर्नु उचित हुनेछ । शत्रु प्रभाव बढ्ने गोचरयोग परेको हुनाले लोकव्यवहार एवं कार्यक्षेत्रमा निकै सावधानी अप्नाएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । घरपरिवार तथा आफन्तीदेखि टाढा बनाउन ग्रहगोचरले जोड गरिरहेको छ, प्रदेशी हुने तथा मुग्लान पस्ने काम बन्ने छ ।
विनामेहनतको कैफियत आम्दानितर्फ चेष्टा बढ्नसक्ने र त्यसले पछि पश्चातापमा पार्नसक्ने खतरालाई नकार्न सकिन्न । महादशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूलाई विपरित फल बढी घटित हुनेछन् जसको लागि संबन्धित ग्रहउपचारको उपाय अवलम्बन गर्नु शुभकर हुनेछ । रपनि आफ्नो आस्था एवं सिद्धान्तबाट विचिलित नभइ स्वकर्मशील रहनाले तसै उपलब्धि हातपार्न सकिने छ ।
वर्षको मध्य पछि छोटो समयको लागि तसै अनुकूल रहने छ । रोजगारको अभिलाषीलाई जागिर मिल्ने र जागिरेलाई प्रमोशन हुनसक्ने छ । व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दामा स्तर वृद्धि हुनेछ । राजनीति एवं सामाजिक सेवा आदिमा पदप्रतिष्ठा र जिम्मेवारी बढ्ने छ । विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सफलता मिल्ने छ । जग्गाजमिन थपिने छ, गृहनिर्माण आदि कार्य संपादन गर्नसकिने छ । सामान्य कष्टको बाबजुत सन्तान अभिलाषीलाई सन्तान प्राप्ति हुने तथा सुख एवं सन्तोष मिल्ने समय छ ।
खेलाडी, शारीरिक परिश्रम एवं कृषि र कलाजन्य क्षेत्रमा आवधिक सफलता प्राप्त हुनेछ । जन्म समयमा शनि आदि ग्रह अनुकूल अर्थात कारक रहनेको हकमा आकस्मिक उपलब्धि तथा अप्रत्यासित लाभ एवं राजमान र अधिकार प्राप्ति हुनसक्ने संभावना पनि रहेको छ । न्यायिक विजय मिल्ने र कुलभित्र प्रतिष्ठा बढ्ने छ । राम्रो काममा नयाँ लगानीको अवसर प्राप्त हुनेछ । शेयर आदिबाट पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिने छ । विशेष कार्यहरू र रोकिएर रहेका काममा सफलता प्राप्त गर्न तथा पूरा गर्नसकिने छ । समय र अवसरको उचित ढङ्गले सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नाले सामाजिक एवं व्यवहारिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रष्ठिाको साथमा भौतिक उन्नति हुनजाने छ ।
तर, महादशा, अन्तर्दशा एवं योगिनी दशा आदिमा प्रतिकूल तथा अकारक दशा चल्नेहरूको लागि समय अल्लि बढी विपरित सिद्ध हुनेछ । माघ महिनाको अन्तिमबाट साढेसाती शनि शुरु हुँदैछ । झुटो लाञ्छना लाग्ने, चारित्रिक एवम् नैतिक प्रतिष्ठामा आँच आउने, मुद्धामामिला सपर्नसक्ने, धन–जन तथा भौतिक सम्पत्तिको क्षतिखति हुने र चोटपटकादि भय रहेको छ । दैविक विपत्ति, कूल–परिवारमा रोगशोक आदिको संकेत छ । नगरी नहुने काममा बाहेक अन्यमा बढी सरोकार नगरी इष्ट साधना तथा कर्ममा तप बढाउनु तपाईको लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।
यो वर्ष मीन राशिका व्यक्तिहरूले इष्टदेवको साथमा माँ बगलामुखी एवं विद्यार्थीहरूले माँ सरस्वती र भैरवदेवको साथै फागुनदेखि महावीर पवनपुत्र हनुमानको साथमा माँ भगवतीको भक्ति उपाशना गर्नु अथवा आफ्नो कुल धर्म संस्कृति अनुसार सात्त्विक तरिकाले गुरु बृहस्पति, राहु र केतुको साथै माघमहिनाको अन्तिमबाट शनि ग्रहको शान्तिका उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु शुभकर हुनेछ । यसै गरी ब्रह्मज्ञानी गुरुजनको आशीर्वाद लिने, दीनदुःखी, वृद्धवृद्धा एवं गाईको सेवामा सहयोग गर्ने, विद्यार्थीलाई पाठ्य सामाग्री उपहार दिने गर्नाले शुभफललाई बढाउन मद्दत मिल्ने छ ।
कतिपय व्यक्तिललाई फाप्ने कलर एवं नं.को बारेमा जान्ने ईच्छा हुनसक्छ । यद्यपि ग्रहरत्न, रङ्ग र अङ्कको प्रयोग गर्दा राशिको आधारमा मात्र नभएर जन्म कुण्डलीका केन्द्र त्रिकोण अनुसार कारकत्त्व विचार पुर्याउनु पर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुनेछ । तथापि राशिको आधारमा कलर र नं. जान्न चाहनुहुने मीन राशि हुने व्यक्तिहरूले पहेंलो, रातो र सेतो रङ्गको प्रयोग गर्नु वा यी रङ्गका वस्तुको प्रयोग गर्नु र यसै गरी अङ्कमा ३, ४ र ८ अङ्कको प्रयोग फापकर हुनसक्ने छ ।